Tsy fandriampahalemana : nanao be midina ny lehiben’ny polisy teto Antananarivo | NewsMada
Tsy fandriampahalemana : nanao be midina ny lehiben’ny polisy teto Antananarivo
Nidina ifotony mihitsy ny lehiben’ny polisy nanome toromarika ireo polisy miasa alina. Ady amin’ny tsy fandriampahalemana io ka heverina fa hahomby.
Ny alin’ny 24 hifoha 25 desambra, nanatanteraka fidinana ifotony ireo lehibe tompon’andraikitra avy eo anivon’ny polisim-pirenena. “Tafiditra ao anatin’ny hetsika fanamafisana ny fampandriana fahalemana mandritra izao ankatoky ny fety izao izany”, hoy ny fanazavana. Notsidihina tsirairay avy ireo kaomisaria sy paositry ny polisy rehetra eto an-dRenivohitra, ary nandritra izany fidinana ifotony izany no nitondran’ireo tompon’andraikitra ny teny fankaherezana ireo polisy izay miasa tsy miato. Hitohy hatrany izany hetsika izany ary hanamafy ny fisafoana ataony ny polisy. Mbola mandry andriran’antsy hatrany mantsy ny mponina eto an-dRenivohitra amin’ny asan-jiolahy. Manao ny ataony ny mpanendaka, ny mpamaky trano, ny mpanao fanafihana mitam-piadiana, indrindra fa ny mpaka an-keriny. Miandry vokatra ny olona.
Ankoatra izay, nanatanteraka hetsika “Opération alcotest” ny avy eo anivon’ny BAC na “Brigade des accidents” ho fisorohana ny lozam-pifamoivozana amin’izao ankatoky ny fety izao noho ny tsy fitandremana. Niarahan’ny BAC sy ny CUI (Compagnie urbaine d’intervention) izany hetsika izany, ary faritra maro no nanaovana fanaraha-maso. Teny amin’ny Rond point Ankazomanga, Soarano, Analakely. Fitazomana GAV 48 ora izay tratra mamily fiarakodia ao anaty hamamoana, ary ny fandefasana ny fahazoan-dalana mamily fiara any amin’ny prefektioran’ny polisy ho fanasaziana ireo minia mandika lalàna. Miisa enina ireo mpamily notanana GAV noho ny familiana fiara anaty hamamoana io alina io. “Lahy tokana ny aina, izay tonga soa ihany no arahabaina”, teny nosafidin’ny BAC nandritra ity hetsika ity, izay marihina fa ho hamafisina fa tsy hijanona hatreo”, hoy ny polisy.
Marihina fa mandoa lamandy 100.000 Ar ka hatramin’ny 400.000 Ar ireo olona mamo mitondra fiara, ary mety miafara amin’ny fanalana ny fahazoan-dalana mamily ihany koa. Ao amin’ny fehezan-dalàn’ny fifamoivoizana malagasy izany, amin’ny an-dalana 7.1.